Abasetyhini abaninzi bafumana amava, kubandakanywa nakwiintlobo. Kancinci kuba ngumntu oqhelekileyo, akukho zizathu ezicacileyo, sizongamela yonke into size sizenzele. Indlela yokuyeka ukukhathazeka kwaye uphile ngokuthula, kuba ukuba uhlala uxinzelelekile kwaye ukhathazeke, ngoko silimaza umzimba wakho. Indlela yokufunda ukujamelana nexhala kunye nexhala?
Ndingathini ukuyeka ukukhathazeka?
Umhlengikazi waseMerika uRoger Dzhelomi uyaqiniseka ngokuqinisekileyo ukuba ukuba ubomi bomntu buzele zonke izibophelelo, kumqhubela ekubeni uxinzelelo olukhulu. Yaye uthi ufanele ubhale phantsi uxanduva lwakho kwaye unqande ngesigamu, kodwa nokuba oko kubhaliweyo kwiphepha kubonakala kunzima. E-Amerika kukho intlangano yentlalo "Siza kwenza lula ubomi," amalungu ale ntlangano aqiniseke ukuba ukuba ufuna ukuzenzeka ngoMgqibelo ucoceke, kufuneka uqeshe umninikhaya okanye ufune ukucoca. Nangona kubiza, kodwa impilo iyabiza.
Yenza iimvumbo zakho .
Ubulumko bamaNdiya eMelika abubuzwa, ngoko bahleka ngamayeza. Udinga ukuhleka ubuncinane kathathu ngosuku, kwaye ngenxa yoko zonke iindlela zilungile - i-anecdotes ezintle, abantu, iincwadi, iifilimu. Emva koko, iingcinga ezinzima ziya kushiya, kwaye ukugubha komzimba kususa izihlunu ze-muscular entanyeni nasemagxeni, ngokukodwa xa uhleka, uphosa kwakhona intloko yakho.
Abo bafuna ukuqeda uxinzelelo, kufuneka ufunde ibinzana elithi "andinayo ifowuni." Umthwalo omningi womsebenzi uhlala kwindawo yokufikelela. Iingcali zengqondo zithi indlela eqinisekileyo yokulahlekelwa uxolo yindlela yokuthetha ngokugqithiseleyo. Into eyona nto imfuneko kunye nobuntu, bakholelwa, inomnxeba ngomatshini wokuphendula, ikuvumela ukuba ufumane ulwazi, ungaphenduli.
Xa uvuka, ucamngca .
Ngokuqhelekileyo, ukuhlaselwa kwentliziyo kuvela ekuseni kakhulu, xa izinga loxinzelelo luphezulu kakhulu: umntu ubuya ephupheni, mhlawumbi akayithandi kakhulu, kodwa ke ubhekane neengxaki ebomini boqobo. Ngaphantsi kweli dyokhwe, intliziyo ayikwazi ukuma. Nantsi sifuna ubuncinci imizuzu embalwa yokucamngca kusasa okanye imizuzu embalwa ukugxila kumfanekiso omnandi, ngoko ukuguquka ukusuka ebuthongweni kuya kwenene kuya kuba buhlungu, kwaye usuku luya kuzinza.
Ukuba ukukhutshwa kwemali akukuvuyisi, khalela "imali eyongezelelweyo". Ukuphishekela imali kuya kukunceda ucebile, kodwa kungenakuphilisa. Njengoko kuboniswa zifundo eziqhutywe kwiYunivesithi yaseCalifornia, abantu abaneemali ezinkulu kwiikhadi zemboleko zezilwanyana ezixinzelelekileyo zi-30% ngaphezu kwalabo abangenazo izixa.
Musa ukuhlala kwiqhosha .
Khawucinge ngolu hlobo, umfazi osekhulile ugijima kwiT-shirt kunye neemputshane, une-antenna phezu kwentloko yakhe esuka kwifowuni, indlebe enye umnxeba, kwelinye indlebe iphonephone evela kumdlali, kwaye oku akusilo lonwabo, uxinzelelo. Ingozi kukuba sifuna ukufumana zonke iinkqubo ezigqibeleleyo kunye nobugcisa obutsha. Kodwa kungcono ukuhamba ngezinye iinkqubo ngaphandle kwemoto, ifowuni, umculo, ukuhamba nje.
Fumana umsebenzi ngomoya .
Ngokuqhelekileyo umsebenzi awufumani iqhawe. Kukho izixhobo ezi-4 zokusebenza: ingcweti, i-careerist, i-rational and ideistist. Umculi ukhetha ukusebenza kwishedyuli yakhe kwaye ngokwakhe, xa efika eofisini, uyabuna okanye ahlupheke. Ukuqonda, othanda ukufumana imiyalelo, uya kumthiya umphathi wakhe, ngubani oya kumnika "ukucinga ngokuzimela". Umqhubi wemfuno udinga ukhuphiswano, unako umzabalazo kwaye uphumelele kwiintlanzi, umntu okholelwa kwixabiso lakhe angagula, kuphela ekucingeni ukuba uya kuqhathaniswa nomntu.
Yiba ngumbane .
Xa umntu uthi akanalo ixesha, oku kubonisa isimo sengqondo esingapheliyo. Emva koko, ixesha liyimpilo, kwaye ukuba akukho xesha, ubomi bufanele kuphelile, umntu uqala ukuba neentloni. Kwaye akumangalisi ukuba uqeqesho lweentsuku ezi-2 "Indlela yokuqala ubomi kunye nokuphelisa uxinzelelo" lubiza imali eninzi. Owesifazane ongenasicatshulwayo kwaye ehlazileyo ophinda athi angaphumi kwaye akaphuli ndawo, akayidingi le miqeqeshwana, ulungele ukukhathazeka kwakhe kwaye oku akuyona inxalenye yomsebenzi wakhe.
Qinisekisa ukuba ungakanani umntu ongenasiphelo
Uze ucinge ukuba uyavuma okanye akunjalo ngeengxelo ezinjalo:
Ngoku ndineengcinga ezininzi kwintloko yam.
Xa kungekhona indlela endilungiselele ngayo, ndiqala ukucaphukisa.
Ngokusoloko ndixhalabisa ngeentsuku ekupheleni.
Andikwazi ukulala xa ndiqala ukucinga ngeengxaki.
Ukususela kwimincili, isisu sam, emva, intloko iqala ukuhlamba.
Ndihlala ndixelelwa ngabanye ukuba ndivakalelwa kakhulu.
Xa ndixhalabele nantoni na, ndikhala.
Xa ndixhalabile, kunzima ukuba ndigxilise.
Bala ukuba zininzi iimpendulo ezintle "ewe". Ukuba iyalingana ngokulinganayo neyoku-1 okanye yesi-2, uvuyo lwakho luyimida eqhelekileyo kwaye akukho nto unokukhathazeka ngayo. Phinda uphinde uhlolisise le mvavanyo ukuze ukwazi ukubona iimpawu zokuxhalaba ngokweqile ngexesha.
Ukuba unika iimpendulo ezi-3 ukuya kwezi-4 ezifanelekileyo, ngoko imeko ayibalulekanga okwamanje, kodwa kukho iingxaki ezinxulumene nolonwabo oluqinileyo. Ukuba uphendule "ewe" kwimibandela engaphezu kwezine, thatha amanyathelo okukhawuleza, de kubekho uxhalaba lwakho lubonakala kwimpilo.
Uqala njani ukuhlala ngokuthula?
Yakha isimo sezulu esilungezile, kwaye usebenzise ezi ngcebiso:
Yidla ukutya okunempilo kwaye ungadli ebusuku.
Ukuba awuhlali ukhululekile kwindawo yokusebenzela nasekhaya, cinga ngezinto ezifunekayo ukuba zitshintshwe ebomini.
Cinga ngezinto ezilungileyo, phawula kuphela okulungileyo, ziba nomusa kuwe.
Nsuku zonke, hamba umoya omtsha.
Ukulala ubuncinane iiyure ezingama-7 ngosuku.
Nsuku zonke, phumula kwaye ucamngce.
Ngesithathu ngeveki, ngena kwimidlalo, uhlobo oluthandayo.
Ukuphindaphinda kabili ngeveki, udibanise, udwebe, uye kumdaniso, mamela umculo, yenza oko kukuthintela ukulibala ngeengxaki zakho.
Zibeke umgomo onokukunika amandla ukuze uqhubeke.
Ungayeka njani ukhathazeka kwaye uphile ngokuthula? Abaninzi bethu bayazi ezi ngcebiso, kodwa bambalwa kakhulu abantu. Kodwa banako ukukunceda ukuqala ukuhlala ngokuthula kwaye ngokuqinisekileyo ukubheka ubomi kwaye kunokukunceda ukuyeka ukukhathazeka. Ukususela ngoku kukho abantu abaninzi abaphinda bahlaziye ngokuphindaphindiweyo amanani kunye noxilongo lwexinzelelo kunye neuroses. Injabulo ingenza, uphendule ubomi esihogweni kwaye ayiyi kunika ngisho nosuku oluphumayo ukuphefumula isifuba esipheleleyo. Khumbula ukuba nayiphi na imeko yesikhashana, kuba yonke into iyadlula.
Yintoni eyimfuneko yokwakha intsapho eqinile neyoyolo?
Xa akufanele uthembele kuphela kuwe?
Smile kakhulu kangangoko kunokwenzeka - uhleka uza kuvula iimangaliso
Iklabishi enobuqili ihamba kwi-multivariate
Ukuphulukisa iimpahla ze-schungite amaminerali
Yintoni elindele inkunzi yegusha ngo-2010, i-horoscope?
Isixazululo seengxaki zehlabathi kwixesha lethu: ifilosofi
Iimbindi zeWundlu, izakhiwo eziwusizo
Imali ebuhlotsheni bakho abathandekayo
Ukuhluthwa: iimpawu, unyango ngexesha lokukhulelwa
Yintoni iingubo eziphuphayo? Ukutolika kwiiNkanuko
Inzuzo kunye nengozi ye-ghee
Mackerel kunye nemifuno
Ziziphi iintlobo zokusela eziluncedo kumzimba, kwaye ezingekho kakuhle?
Ukucoca ubuso be-cosmetologist: ngubani na ongakhethayo?
Indlela yokwenza ubuhlobo bube nobuhlobo obunothando
Isaladi yamaGrike yoNyaka omtsha